Istaraatiijiyad "Saynis": istaraatijiyad faa'iido leh oo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah | vfxAlert official blog
Istaraatiijiyad «Saynis»: 4 tilmaameyaal loogu talagalay ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah
Markaad ka fekereyso sida lacag looga sameeyo ikhtiyaaraadka ikhtiyaari ikhtiyaari ganacsade waa inuusan aaminin fudeydkooda. Badhano waaweyn "CALL / PUT" ayaa sababa rabitaan deg deg ah oo la gujiyo oo si deg deg ah faa'iido looga helo. Natiijadu had iyo jeer waa isku mid - luminta dhigaalka. Ha iloobin, qalabka falanqaynta farsamada ee caadiga ahi wuxuu keeni karaa faa'iido badan sida ku jirta istiraatiijiyadda “ Sayniska ”.
Istaraatiijiyaddu waxay isticmaashaa afar tilmaamood oo heer sare ah:
Hull Moving Averagе (HMA) . Tilmaamayaasha isbeddelka ee aan ku go'aansano barta furitaanka ikhtiyaarka. HMA waxay si cad u qeexaysaa isbeddelka isbeddelka, wuxuu leeyahay dib u dhac ka yar midka fudud (SMA) iyo sarrifka (EMA) Celceliska Dhaqdhaqaaqa. Istiraatiijiyadda fursadaha binary aan loogu tala galay ganacsiga xilliyada guri!
Index Index Commodity (CCI) . Tilmaame farsamo oo muujinaya inta qiimaha uu ka weecday celceliskiisa isku celceliska ee muddooyinka la cayimay. Haddii qiimaha uu ka leexday wax ka badan inta udhaxeysa (+ 100/100 heerarka), waxaan rajeyneynaa isbedel dhanka isbedelka ah. Tani waxay noqon doontaa xaqiijintii ugu horreysay ee calaamadda Celceliska Dhaqdhaqaaqa.
Iskucelcelis Run Range (ATR) . Waxay muujineysaa isbedelka suuqa hadda jira waxayna xaqiijineysaa calaamadda CCI. Haddii isbeddelku sii kordho (tilmaamuhu kor buu u socdaa), waxaa jiri doona sixitaanno isbeddel gaar ah oo aad ka furi karto fursadaha ikhtiyaariga ah ee muddada-gaaban .
Oscillator Cajiib ah (AO). Oscillator waa inuu ugu dambeyntii xaqiijiyaa ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ee Moverage Average. Calaamado dheeri ah ayaa lagu heli karaa iyadoo la adeegsanayo heerar dhexdhexaad ah - xaaladdan, Williams Magic Oscillator sidoo kale waxay u shaqeyn doontaa sidii tilmaame xaalado xad dhaaf ah / xad dhaaf ah.
Calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah:
Ikhtiyaar CALL. Qiimaha ka sarreeya Celceliska Dhaqdhaqaaqa iyo CCI iyo osRillators ATR ayaa kor u kacaya. Astoggram-ka cajiibka ah ee Oscillator waa mid cagaar ah, ka sarreeya ama ugu dhow eber intii suurtagal ah.
Dooro door. Qiimaha ka hooseeya Celceliska Dhaqdhaqaaqa iyo CCI iyo osRillators ATR ayaa hoos u socda. Astoggram cabsi leh oo Oscillator midab casaan leh, ka hooseeya ama u dhow heerarka eber.
Waxaad ku furi kartaa xulashooyinka qiimaha dib uga soo noqoshada celceliska dhaqdhaqaaqa iyo calaamadda vfxAlert. Kuwa cusub, ganacsigan laguma talinayo, waxaa fiican inaad sugto xaqiijinta oscillator!
Fur ganacsi shumaca xiga ka dib markaad calaamadaha binary ganacsiga . Waqtiga uu dhacayo ikhtiyaariyada waa in aysan ka yarayn 5-7 daqiiqo xitaa haddii ay tahay waqti shaqeed la doorto daqiiqad, sida fiidiyowgeena.
Natiijooyinka xisaabinta HMA waxay dhaaftay celceliska qiimaha qiimayaasha waxayna aad ugu dhow yihiin jaantuska waqtiyada yar yar, taas oo kordhinaysa tirada calaamadaha binary ee bilaashka ah . Celceliska Dhaqdhaqaaqa waa inuusan u shaqeyn sidaan oo kale xitaa haddii wax waliba ay ku wanaagsan yihiin xogta taariikheed - haddii ay jirto isdhexgal aad u dhow "kordhinta tirada xilliyada;
Marba marka ka sii dambeysa dhaqdhaqaaqa dhinaca suuqa ah uu sii socdo, waxaa sii kordheysa suurtagalnimada isbeddel xoog leh ka dib dhammaystirkiisa. Xaaladaha noocaas ah, waxaad ku furi kartaa ganacsiyada calaamadaha ugu horreeya ee Dib-u- Celinta Celceliska Dhaqdhaqaaqa iyo calaamadaha binary ee xoogan ee ka socda vfxAlert ;
Ganacsi otomaatig ah sida ku xusan istaraatijiyadda « Saynis » waa suurtagal: dhowr nooc oo ah ikhtiyaari ikhtiyaari ah waxaa laga heli karaa shabakadda, laakiin, sida nidaam kasta oo wax lagu nadiifiyo, way ka wanaagsan tahay in gacan looga ganacsado iyadoo la adeegsanayo qorshahan. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad si wax ku ool ah u hagaajiso nidaamka isbeddelada suuqa, iyo hantida badan ee istiraatiijiyaddu waxay kuu dammaanad qaadaysaa inaad joogto u joogto maalin kasta.